Indlwana esendlini epaki likazwelonke - I-Airbnb
Indlwana esendlini epaki likazwelonke
Hřensko, Ústí nad Labem Region, i-Czechia
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Adriana
U-Adriana Ungumbungazi ovelele
Le ndlu ethokomele yasehlobo itholakala enhliziyweni ye-Bohemian Switzerland National Park enyakatho ye-Czech Republic. Uphawu lwalesi Siqiwu Sikazwelonke - iPravčická brána (Prebischtor) iqhele ngamakhilomitha ayi-7 kuphela ukusuka endlini yethu yasekhaya. Le ndawo ihlukile ngenxa yamathuba amaningi okuqwala izintaba, ukugibela ibhayisikili, ukuphumula noma ukuqoqa amakhowe. Emaminithini ambalwa ungakwazi ukuwela umngcele futhi ujabulele ezinye izindawo ezithakazelisayo eJalimane.
Ikotishi linamakamelo okulala ama-2 anemibhede emi-3 phezulu kanye nombhede ongusofa ongu-1 phansi. Igumbi lokuhlala liyindawo ekahle yokuhlala nomndeni noma nabangane, nidlale imidlalo yedeski futhi nibe nesikhathi esimnandi ngaseziko. Ithelevishini ineziteshi eziningi zesiJalimane nesiCzech. Ikhishi lihlome kahle ngesiqandisi, isitofu, uhhavini, umshini wekhofi, i-microwave, iketela nezitsha.
Kuhlinzekwa amathawula ahlanzekile nelineni, insipho, ishampoo kanye nokomisa izinwele.
Kukhona i-grill enezihlalo engadini; i-pergola enophahla enezihlalo ezengeziwe ngemuva kwe-cottage inikeza ubumfihlo nokuphumula emvelweni.
Ngenxa yokuthi sifuna ukugcina isimo esiyingqayizivele sendawo, i-cottage ayinalo uxhumano lwe-Wi-Fi.
Uzoba nengadi yonke enezihlalo zangaphandle kanye ne-grill onayo. Ungakwazi ukupaka imoto yakho ngqo ku-driveway okungeyesakhiwo.
4.75 · 182 okushiwo abanye
Ngizozama ukuhlangana nawe lapho ufika, kodwa nakanjani ngizotholakala kuwe ocingweni ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ngizozama ukwenza konke okusemandleni ami ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo futhi kukhumbuleke ngangokunokwenzeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Hřensko namaphethelo